Azu azu kaapu: njirimara na umu di iche iche | Azu
Carlos Garrido | | Mmiri aquarium, Akwarium mmiri oyi
A bịa n'inwe mmasị n'inweta ụdị azụ dị iche iche iji gbakwunye na akwarium anyị, ụdị anụ ọhịa buru ibu na-emepe n'ihu anyị, ndị nha ha, agba ha, wdg. Otú ọ dị, n’ime ọgaranya a dịgasị iche iche, e nwere otu azụ na-apụ iche karịa ndị ọzọ n’ihi àgwà ndị mere ka ọ bụrụ ihe a ma ama. Anyị na-ekwu maka ụlọikwuu, otu n'ime azu mmiri azu ọzọ nkịtị.
1 Azu azu kaapu
2 Azụ Kois
3 Kedu otu esi elekọta Kois ma ọ bụ Carp anyị?
4 Di iche iche na umu azu nke Carp
Azu azu kaapu
Common Carp (Cyprinus carpio) sitere na mpaghara Europe na Eshia. O bu azu azu na-eguzogide ọgwụ ma dịkwuo mma n'ebe ị biNke a kpatara na o jisiri ike merie ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ akụkụ ụwa niile wee nweta "ugwu" nke ịbanye na aha otu ụdị ndị mbibi 100 na-emerụ ahụ kacha njọ n'ụwa dị ka International Union for Conservation of Nature si kwuo.
Ọtụtụ mgbe, ụdị ndị toro eto na-eru ogologo nke dịgasị n'etiti 60 na 90 sentimita, na ibu nke di ya buruburu Kilogram 9.
Ị mara otele azu ka ndu nnukwu tent? A na-eme atụmatụ na ụfọdụ ụdị, ma ọ bụrụ na ha nwere ụfọdụ ọnọdụ n'oge ndụ ha, nwere ike iru mita 1.2 na ịdị arọ 40 n'arọ, ma gafere afọ 60, ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ihe ọ bụla! Ha ga-adị ndụ na mmiri na-asọ oyi na mmiri dị ntakịrị ma ọ bụrụhaala na ndị a nọ na ọnọdụ okpomọkụ n'etiti 17 na 24 ºC.
Ha bụ tumadi omniiki, na nri ya nwere osisi mmiri, ụmụ ahụhụ, obere crustaceans, wdg. Oge ozuzu na-amalite na oge opupu ihe ubi, ma na-ewere ọnọdụ n'ime mmiri miri emi.
Ndi nke nwanyi ka ha dinara 300.000 nsen nke, dabere na mmiri dị na mmiri, nwere ike ịmịchaa mgbe ụbọchị 3-4 gasịrị.
Ma ụmụ nwoke ma ụmụ nwanyị na-eru ntozu ntozu nwoke na 4 afọ. Agbanyeghị, a priori, enweghị agba dị oke mma, na China yana, karịa nke ọma na Japan, ha jisiri ike site na ịzụlite ozuzu iji mepụta ụdị dị iche iche ma ọ bụ ụdị nke agba na-egbuke egbuke ma doo anya, nke pere mpe, nke a maara dị ka Koi.
Koi, n'adịghị ka ụdị ụmụnne ndị ọzọ nwere ihe ịga nke ọma sitere na ngalaba ịchụ nta na ịkụ azụ, aghọwo ndị a ma ama dị ka anụ ụlọ. Dị ka ọchịchọ ịmata ihe, Koi na Japanese pụtara "ịhụnanya" ma ọ bụ "mmetụta", na ozuzu ụmụ anụmanụ ndị a toro nke ukwuu na mbido narị afọ nke XNUMX, mgbe ọdọ mmiri Japan koi nke carp mara mma mara mma wee bụrụ onye ama ama. . Nke ukwuu, na ọdọ mmiri ndị a gbasara na mba dị iche iche na-abụghị Asia n'ókèala, na ọbụna ọnụ ọgụgụ nke ọkachamara azu kaapu breeder.
Kedu otu esi elekọta Kois ma ọ bụ Carp anyị?
Dịka e kwuru n'elu, ndị Kois abụrụla azụ ụlọ site na mma. Nke ukwuu, na ọ bụ ihe a kacha atụ aro maka ndị niile na-amalite na ntụrụndụ a magburu onwe ya ma chọọ ịnwale ụdị na-achọ obere nlekọta, na-egbu ma ọdịdị na agba, nke ahụ bụkwa nkwa nke ihe ịga nke ọma na akwarium ha. na pond.
Azu kaapu ma ọ bụ Kois nwere predilection maka akụkụ etiti ma ọ bụ akụkụ ala site na ebe ha nọ, na-arịgo mgbe niile n'elu ala iji zụọ nri. Ha nwere ike biri na obere otu, tinyere ihe ruru 6-7 ndị mmadụ. N'ezie, ọ dị mma ịmara na mgbe ụfọdụ ha nwere ike igosipụta agwa ime ihe ike, ọkachasị obere ụdị. A na-eme ka ọnọdụ a pụta ìhè na obere aquariums ndị ahụ pere mpe, nke dị mfe iji chọpụta otu azụ ndị a nwere nsogbu ike. Ya mere, ọ bụghị ihe amamihe dị na ha itinye ha na obere tankị azụ, dịka ndị gbara ya gburugburu, ma ọ bụ na aquariums ndị ahụ ebe ha bi na ọtụtụ ọnụ ọgụgụ nke ụdị. Nke a ga - emekwa ka mmepe gị bụrụ ihe kacha mma. Oghere dị oke mkpa maka azụ ndị a, ya mere aquariums na-atụ aro hà ma ọ bụ karịa 90 lita mmiri.
Ọnọdụ okpomọkụ nke mmiri ekwesịghị ịbụ nnukwu nsogbu, ebe ọ bụ na anyị achọpụtalarị na ụmụ anụmanụ ndị a na-emegharị nke ọma na ọnọdụ ihu igwe. Agbanyeghị, nyere nhọrọ, obere ụlọikwuu ndị a ha na-anabata oyi ka mma, ọ bụrụhaala na ọ dị ntakịrị, karịa okpomọkụ, ebe ọ bụ na okpomọkụ dị elu nwere ike ibute ụkọ oxygen na mmiri nke, n'ụzọ ezi uche dị na ya, ga-egbu ndị na-ebi ya. Enweela ikpe na ọdọ mmiri ndị ụmụ anụmanụ ndị a diri ọbụna ntu oyi.
AL-KO-TE, echere m maka ...
Sera KOI Prof Alim Summer ...
Banyere nri, ekwurula na ha bụ ihe omnevores (nso ndị na -eri anụ), yabụ emela ara. Na ihe nri nwere ụdị flake nke anyị na-ahụ na ntọala ọ bụla ọkachamara na anụmanụ, ọ zuru. Mana ọ bụrụ na anyị chọrọ ka ha rie nri bara ụba na nke dịgasị iche iche, anyị nwere ike nye ha ụfọdụ bie nri dị ka obere ahụhụ ahụhụ ndi eji egbu azu. Na mgbakwunye, ụfọdụ ihe mgbakwunye akwụkwọ nri anaghị afụ ụfụ, ọbụnadị na-enye akwukwo nri, nke anyị ga-achọpụta otu ha si eme obere aru. Ga-amarakwa na n'oge oyi, Kois na obere kapeeti na-abanye n'usoro nke ike ọgwụgwụ, nke ọrụ ya na-ebelata nke ukwuu, nke na-egosi mbelata nke metabolism yana, n'ihi ya, na agụụ anụmanụ. Ọ bụrụ na anyị achọpụta na mgbe anyị na-enye ya nri, ọ naghị eri nri ahụ ma ọ bụ mee ya obere obere, ọ gaghị abụ ihe amamihe dị na ya isi ọnwụ, ewela iwe karịa, ebe ọ bụ na iribiga nri ókè nwere ike ịkpata nsonaazụ na-egbu egbu.
Ihe ọzọ dị oke mkpa bụ nzacha mmiri. Ekwuru na nzacha na aquarium ma ọ bụ ọdọ mmiri anyị ga-eme n'ụzọ mpụga. Ọ bụrụ na azụ anyị nọ n'ime obere akwarium na -enweghị nzacha, anyị ga -eme mgbanwe mmiri ugboro ugboro, ebe ụdị a na -ewepụta oke mkpofu nke na -emebi ogo ikuku oxygen echekwara na mmiri. Anyị na -akwado ka ị tụọ nza na nzacha mpụga dị ka ndị a.
Di iche iche na umu azu nke Carp
N'ahịa a na-enye anyị ụdị azụ azụ dị iche iche maka akwarium anyị. N'agbanyeghị na ha bụ otu ụdị, e nwere ọtụtụ ụdị azụ Tent nke agba na ụdị na-adịkarị iche. Mara dị ka "American Comet" Ọ bụ ụdị dịgasị iche iche kachasị gbasaa n'ihi na ọ chọrọ nlekọta dịkarịa ala. Ntughari ha adighi ka elongated na aru ha di tara nma. Na-eso ya "Ryukin" o "Ọdụ nke ákwà mkpuchi", nke nwere ntù na ogologo ogologo. Yiri nnọọ na nke ikpeazụ bụ "Ikpe ekpere" na "Ọdụm Isi", ọ bụ ezie na ụdị ndị a na-ebu ezigbo papillae cephalic. Abụọ ndị a, dị ka anyị na-ekwu, bụ nke kachasị gbasaa, mana ọtụtụ ndị ọzọ nwere nnukwu mma nwere ike ịgbakwunye ha.
Akụkọ banyere azụ Koi
Pathzọ zuru ezu na edemede: Azu » Mmiri aquarium » Akwarium mmiri oyi » Azu kaapu
Enwere m ụlọikwuu abụọ dị ka oroma na mbido, naanị ha abụghị oroma, ha bụ ọlaọcha, nsogbu bụ na otu n'ime ha na-acha uhie uhie na amaghị m ihe kpatara ya, ọ bụrụ na ọ bụ ọrịa ma ọ bụ nri, ụlọikwuu nke ọzọ bụ otu ọlaọcha na agba
Zaghachi Liz Sifuentes
Na ụkpụrụ, ụdị a bụ azu kaapu, ọ bụghị azu kaapu, ha nwere ọtụtụ ihe jikọrọ, mana ha dị iche na ibe ha. Ọmụmaatụ, rịba ama na a azu kaapu nwere o siri ike ọ bụla dandruff na ha na-adịghị acha ,. N'aka nke ọzọ, carpin ee na ha bụkwa ụdị nke agba dị iche iche na ha nwekwara ọdụ abụọ, ha bụkarị ndị China. n'ezie a kpọlitere ha maka oriri mmadụ.
The azu kaapu kwa, ma ọ bụ dị iche iche ... na agbanyeghị m ga-agbalị ịza ajụjụ gị.
Ikwesiri iburu n'uche na azu nile ndi no n'agha kwesiri inwe oxygen zuru oke na mmiri, odi nkpa ka i nwaa ikuku oxygenate mmiri site na uzo eletriki (ngwaọrụ).
Mgbe ụfọdụ, ọ nwekwara ike ịbụ nri nke ezughi oke.
Mgbata mmiri dị njọ n'ihi oke nzu ha na chlorine.
Ntụnye: gbanwee ọdọ mmiri ma gbalịa ịgbanwe nri, ana m adụkwa gị ọdụ ka ị gakwuru onye ọkachamara ọ bụghị onye ọ bụla kwuru na ha maara.
AKA NA-AH THE AKW ISKWỌ AH ONE B IS Otu n'ime anụmanụ ndị nwere ike ịnweta mmadụ ole na ole nwere ohere ịhụ na akụkụ ọzọ. M KWURU NA Ọ BR anụmanụ na-erute erutewo nha nke siri ike ikwere
Ndewo, a bụ m ụsọ mmiri, ana m agwa gị na golf golf ma ọ bụ azụ azụ, ma ha bụ ọdụdụ ma ọ bụ ọdụ na-agbasasị, bụ mkpụrụ ndụ mkpụrụ ndụ. You nwere ike ịzụta ihe atụ nwere njirimara na agba ụfọdụ, iji dezie oge ọ nwere ike ịgbanwe ọdịdị ya na agba yana ebe ndị mụrụ ya na ndị nna nna ya nwetara agba ahụ. Ọ dị ka ikpe ekpere na enwere metamorphosis nke na - eme ka ọ too oke ma nwee ike igbochi ọhụụ. N'okwu a, a ga-arụ ọrụ ịwa ahụ ma wepụ ya. Emeela m ole na ole n'ezie mgbe m nọ n'okpuru ọgwụ mgbochi ọrịa na ọ na-eme na tebụl nke mmiri na nlezianya kwesịrị ekwesị. N'ime ha niile enwere m ihe ịga nke ọma. Enwekwara m ike ịkpa ahụ n'akụkụ ụfọdụ nke ahụ nke na-esiri m ike iwepụ karịa ihe egwu. Enwere m olileanya na nyocha a ga-enyere gị aka. M si Uruguay, ajụjụ ọ bụla na ọrụ gị. Na-ekele Annette
Zaghachi Annette Alvarez
Liz, echefula na mmiri ọkụ ga-adị ala na ọdọ mmiri ka ukwuu ma nwee ihe kwekọrọ na ya maka ogologo ndụ ya.
Horacio Paez dijo
M ofufe azụ maka cyprinids, e nwere ọtụtụ iche na nke azu kaapu na barbel, na a kwesịrị ndụ na-adịghị fattened maka azu kaapu azu azu kaapu nwere ike iru 30Kg. Enwere 47 mana ha buru oke ibu (n'ihi boilis). Na ihu ị nwere ike ịhụ foto m nke ụfọdụ ụdị buru ibu. facebook com / efe efe
Zaghachi Horacio Paez
Liz: n’agunyeghi azịza ndị gara aga enwere ike inwe ọtụtụ ihe, amaghị m afọ ole azụ gị dị ma ọ bụrụ na ha erughị afọ 3 enwere ihe dị ezigbo mkpa iburu n'uche ebe ọ bụ na ọ dị oke mma, ma na okwu nke azu kaapu ma obu koi Di na azu azu ohia site na omumu rue ihe ruru. 3 afọ, mgbanwe agba mgbe niile zuru oke, ọtụtụ oge m họọrọ obere azụ x agba mana n'ọtụtụ ọnọdụ agba gbanwere ruo mgbe emesia afọ 3 nke ndụ ya, na ikpe nke m, ọnụ ọgụgụ ka ukwuu na-ewere ọbara ọbara ọbara ọbara ma ọ bụ oroma kpamkpam
Ihe omuma atu 3, otu odo na aketas na azu oji, o mechara gbachacha oroma, oroma nwere ntunye oji taa bu oroma, oroma nwere akara ojii n’etiti ahu, taa o jiri oji nile ma e wezuga ufodu oroma di ike. na ọ na-echedo ya n'isi, 3 bụ carassius ma ọ bụ (azụ azụ) nke ụdị dịgasị iche iche nke kachasị amasị m
Ndewo m nwere 1M D ogologo X 0.40 CN D AKWA NA 030 D OZI Azụ
Enwere m ike itinye azụ azụ azụ onye agbata obi na-enye m mgbe ọ bụla ha nwere nnukwu akpa ya na ha na-eri nri nri
Ndewo, m mere ọdọ mmiri ọdọ mmiri 2000 lita ihe fọrọ nke nta ma zụta azụ azu isiike isii mana otu izu m nwere ha, ha pere mpe, m na-enye ha nri otu ugboro n'ụbọchị. Ndi edi ndammana n̄kpọ mmọ ndidu ke emem? dị ka eziokwu dị na obodo m Santiago de Chile enwere ogo 6 n'ehihie na ihe dịka ogo 14 n'abalị, anyị nọ n'oge mgbụsị akwụkwọ.
M si n'obodo bahia blanc na ndịda nke pvcia nke bs dị ka, argentina ... ajụjụ m bụ maka nri azu kaapu n'oge oyi, amaara m na na mba ndị dị ka Spain, ha na-azụ ha na oke oyi, lee m gbalịrị Enweghi m ike inweta ihe ọ bụla ... ajụjụ m bụ ma ọ bụrụ na enwere ike ịnweta azụ ha ma ọ bụ na ọ gaghị ekwe omume, daalụ nke ukwuu
Zaghachi ka facundo
Ndewo, enwerem azu dika odo nke ha siri na koi gold ma achoro m ima ma o toro otutu
Zaghachi ana lilia
Mkpụrụ ndụ ole ka carp nwere kromosome 1?
Ọ ga-amasị m ịmara ma ha nwere azụ azu kaapu nke Chile, nke dị na mmiri mmiri Chile
Kedu ihe nwere ike ime ma ọ bụrụ na m tinye ha ebe a na-egwu mmiri, ọ nwere mmiri na-ada afọ 4, agbalịrị m PH, ma ọ zuru oke, ha gwara m ka m tinye igwe ikuku, n'ihi na ọ nweghị nzacha, ọdọ mmiri ahụ nwere ihe dị ka lita 5000, bụ ihe na-erughị ọkara nke POOL.
Zaghachi RAUL RAMOS
Ezi ụtụtụ, enwere m ọdọ mmiri nwere ọtụtụ kapeeti, achọrọ m idozi ọdọ mmiri ahụ ka m wee wepụ ha, m ga-achọ aro ụdị ụdị mmiri m ga-achọta ha ka m na-arụ mmezi nke ọdọ mmiri ahụ na ogologo oge ole kachasị oge a tụrụ aro.
Ndewo, m ga-achọ ịma ma azụ m koi na-emebi ụdị azụ ndị ọzọ makana ọ bụ na azụ ọzọ m nwere ọdụm na-anwụ anwụ amaghị m ihe kpatara ya. Daalụ.
Zaghachi David Bravo Morales
Ndewo, azu kaapu chọrọ oxygen
Ndewo, azu kaapu choro oxygen, azu m na-egwughari otutu na n’elu achoro m ima ma o choro ya ka o nwee ike nyere ya aka.
Ole ụdị azụ dị?
Afọ ole ka azụ dị ndụ?